कोहलपुरका डिएसपी शाहीले धम्की दिएको अडियो सार्वजनिक – ईमेची डटकम
कोहलपुरका डिएसपी शाहीले धम्की दिएको अडियो सार्वजनिक
कोहलपुर । इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका इञ्चार्ज डिएसपी हेमबहादुर शाही र तरुण दलका स्थानीय नेता केशर खड्काबीचको फोनवार्ता सार्वजनिक भएको छ । सुरुमा डिएसपी शाहीले तरुण दलका कोषाध्यक्ष केशर खड्कालाई खसी मागेको अडियो सार्वजनिक भएको हो ।
सार्वजनिक अडियोमा ठेक्का पट्टाको काम गर्ने खड्कासँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका बेला डिएसपी शाहीले प्रहरीलाई दशैं मान्न खसी मागेका छन् । चाडवाडमा खसी, पैसा माग्ने दाई–भाईको सम्बन्ध अहिले दुश्मनीमा परिणत भएको छ । तरुणदलका नेताका अनुसार आफूहरुले खसी नदिएपछि डिएसपी शाहीले दुश्मनी लिएका हुन् ।
अडियो बाहिरिएपछि डिएपी शाहीले तरुण दलका नेता खड्कालाई फोनमार्फत दुश्मनी सुरु भएकाले अब तिघ्रा छेडिदिन्छु भन्दै धम्क्याएका छन्, ‘तँ फुक्दै हिँड्, तेरो तिघ्रा छेडिदिन्छु । तसँग वार नै भयो । मेरो नजरमा परिस् है भाई ।’
यो अडियो बाहिर आउनु अघि डिएसपी शाहीले नेपालगञ्जस्थित एउटा रिसोर्टबाट सन्दिपजंग शाहसहित ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिए । विशेष सूचनाका आधारमा त्यहाँ पुगेको बताउने प्रहरीले शाहको गाडीमा पेस्तोल भेटिएको बताएका छन् । प्रहरीले भेटाएको पेस्तोल शाहकै भएको भनेर प्रहरीले दाबी गरिरहेका छ । यसैबीच डिएसपी शाहीले आफैले गोली लोड गरिरहेका अर्को भिडियो पनि बाहिरिएको छ ।
तर, डिएसपी शाही भने पेस्तोल भेटिइसकेपछि मुचुल्का उठाउदा पेस्तोल कस्तो अवस्थामा थियो भनेर देखाएको मात्र बताउँछन् ।
वास्तवमै यस विवाद के हो ? त्यो छानविनको विषय हो । तर, जुन अडियो सार्वजनिक भयो, त्यसले प्रहरीको नेता कार्यकर्ता र ठेकेदारसँग कस्तो सम्बन्ध छ ? भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ । प्रहरीका यस्तै सम्बन्धका कारण सोर्स–फोर्स र पैसा नहुनेले प्रहरीबाट न्याय पाउनेमा विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।